Ny sarimihetsika fiarovana sy fandriam-pahalemana dia ampiasaina hanampiana hanaraka ny torolàlana ataon'ny governemanta ankehitriny amin'ny fiarovana ny fipoahana baomba | Solar Solve Marine
Solar Solve dia afaka manome sary mihetsika eo am-baravarankely izay ampiasaina hanampiana hanaraka ny torolàlana ataon'ny governemanta ankehitriny momba ny fiarovana ny baomba
Ny horonan-tsarimihetsika fiarovana sy fiarovana dia natao hampilamina kokoa ny fitaratra, na amin'ny fanamafisana izany amin'ny fahavakisana ary amin'ny fanampiana azy ireo hamaky fantsona vera vaky amin'ny toe-javatra misy ny fahatapahana na inona antony.
Ny sarimihetsika mazava azo antoka sy azo antoka dia manome vahaolana haingam-pandeha haingana hisorohana ny fanoloana vera lafo vidy sy manakorontana.
Mazava sy tsy hita maso izy ireo rehefa apetraka, ary mahatohitra tohotra, dia mety amin'ny ankamaroan'ny fomba fanadiovana varavarankely tsy marokoroko.
Izy ireo ihany koa dia manara-maso ny 99% amin'ny taratra UV mampihena ny fahaverezana sy ny fahasimban'ny fanaka malefaka sy ireo entana marefo hafa.
Notsapaina sy voamarina amin'ny EN 12600 Class 1B1, sarimihetsika fiarovana 200-micron ampiasaina hanampiana hanaraka ny torolalan'ny governemanta ankehitriny momba ny fiarovana ny baomba. Ny sarimihetsika fiarovana sy fiarovana amin'ny laminy marobe dia ampiasain'ny masoivohon'ny governemanta ary koa fikambanana ara-barotra maro voakasik'izany hamahana ny tena loza mety hitranga amin'ny fipoahana baomba, na fipoahana indostrialy.
Ny sarimihetsika fiarovana sy fiarovana dia azo vidiana amin'ny antsasany na horonana feno.
Ny sarimihetsika fenon'ny varavarankely dia manivana ny 99% amin'ny taratra UV, izay mampihena ny singa fototra amin'ny fihobiana. Na izany aza, ny singa fanampiny toy ny hafanana masoandro, ny hazavana hita maso, ny haavon-tsavony, ary ny fisiana na ny tsy fisian'ny dipoavatra ara-tsimia dia manampy koa amin'ny fanimbana. Noho izany, ny fiarovana lehibe indrindra amin'ny fanodinkodinana dia atolotry ny horonam-peo miloko na metaly izay mandà ny haavon'ny hafanana sy ny hazavana hita maso, ankoatra ny UV.